चुनावमा मिलेर जाने सन्देशले मधेशमा उत्साह - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Main News National राजनीति चुनावमा मिलेर जाने सन्देशले मधेशमा उत्साह
गोलबजार, २१ असोज । प्रदेश सभा र राज्य सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संयुक्त उम्मेदवारी दिने निर्णय प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सार्वजनिक भएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गुप्ताले आफ्नो फेसबुक वालमा उत्साह व्यक्त गरे, ‘आजको दिन मधेशका लागि ऐतिहासिक’ उनी संघीय समाजवादी फोरमबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाटा प्रदेश सभा सदस्यमा प्रस्तावित भएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रको २ गाउँपालिकामा (भगवानपुर र लक्ष्मीपुर पत्तारी) फोरम नेपाल विजयी भएको छ । सखुवानन्कारकट्टीमा फोरम दोस्रो भयो । यहाँ एमाले विजयी भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा फोरम मतको हिसाबले पहिलो नम्बरमा छ । यो पार्टीको मत १० हजार ५ सय छ । दोस्रो मत एमालेको र तेस्रो काँग्रेसले प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यका लागि फोरमबाट सिफारिसमा परेका गुप्ता हौसिनुको प्रमुख कारण यो क्षेत्रमा फोरमले पाएको एक नम्बर मत नै ।
आपसी समझदारीका आधारमा दुवै पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र राज्य सभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउने जनाएपछि उम्मेदवारका आकांक्षीहरु उत्साहित भएका छन् । दुवै पार्टी आन्दोलनका बेला मिल्ने तर चुनावमा फाट्ने प्रवृत्ति यसपालि तोडिएको छ । आगामी निर्वाचनअघि नै दुवै दल साझा उम्मेदवार ल्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि मतदाता पनि हौसिएका छन् ।
एक दशकमा तीन पटक मिलेर आन्दोलन गरेका छन् । सो अवधिमा त्यति नै पटक अर्थात् २ पटकको संविधान सभा र एक पटक पुनः संरचनासहितको स्थानीय तह निर्वाचनमा फुटेर चुनाव लडेका मधेश केन्द्रीय यी २ दलभित्रका नेताहरु आगामी निर्वाचनका लागि कसरी मिल्ने निर्णयमा पुगे ? आगामी निर्वाचनका लागि मिलेर चुनाव लड्ने निर्णयमा किन पुगे यी दल ? यी प्रश्नमै केन्द्रीत भएर मधेश मन्थन भईरहेको छ । आखिर किन र के का लागि मिले यी दल । यस विषयमा मधेश मामिलाका विश्लेषकको तर्क छ, ‘ स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले दिएको जनादेश ।’
‘तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा फोरम र राजपालो प्राप्त गरेको मतले दुवै पार्टीलाई उत्साहित बनायो‘ मधेश मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन, ‘दुवै पार्टीलाई निर्वाचनमा मिल्ने साईत मतदाताले जुराई दिएका हुन् ।’ दुवै दलले प्राप्त गरेको मत तेस्रो चरणाको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो मत पाएका काँग्रेसभन्दा बढी हुन आउँछ उनले तर्क गरे, ‘फुटेर चुनाव लड्दा त यति धेरै मत प्राप्त भयो मिल्दा धेरैभन्दा धेरै मत आकर्षित गर्न सकिने सोचले यी दुवै दललाई मिलाएको हो ।‘ एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुबचि भएको बाम गठबन्धन छ । अर्काे कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण हुँदै गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । फोरम र राजपासँग काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि चरणबद्ध संवाद जारी राखेको छ ।
मिश्र तर्क गर्छन्, ‘राजपा र फोरमबीचको २ दलीय गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेपनि काँग्रेस नेतृत्वकै लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग गर्छ । त्यो बेला फोरम र राजपाले चयन गरेको साझा उम्मेदवारका लागि गठबन्धनसँग दाबी गर्दा वजन भारी हुन्छ’ मिश्रको विश्लेषण छ, ‘कारण, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले फोरम राजपा मतको अंकगणितमा पहिलो नम्बरमा छ ।’ जसका कारण उनीहरुको दाबी मान्न गठनबन्ध बाध्य हुनुपर्ने प्राविधिक आधारहरु छन्, उनीले भने ।
निर्वाचनपछि मुद्दागत सामाधानका लािग कुन गठबन्धसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने कि एक्लै यो निर्णय फोरम र राजपाका लागि सकसपूर्ण छ । यी २ दलका लागि चुनावी तालमेल मात्र नभई मधेशको आधार क्षेत्र निर्धारणको विषयमा निर्णय पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
तर, मधेश केन्द्रीत दललाई काँग्रेसको गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । कारण मधेश केन्द्रीत दलका आधार क्षेत्र खुम्चिएर प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लामा सीमित भएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि गठनबन्धसँग यी मधेसी केन्द्रीय दलले गर्र्ने चुनावी तालमेलमा आफ्नो आधार क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म दाबी गर्ने यसबारेमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ । मधेश केन्द्रीत दलका लागि आगामी निर्वाचनमा आधार क्षेत्रमा पकड जमाउन सहज देखिँदैन ।